Hery Rajaonarimampianina : Manomboka eny ifotony ny fisandratana -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Manomboka eny ifotony ny fisandratana
19/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Asa fa tsy kabary, ary ny fametrahana ny fisandratana 2030 no efa lahasan’ny Filoham-pirenena ankehitriny, satria dia efa nambarany fa eny ifotony no hitondrana izany asa izany. Noho izany dia nisy ny fihaonan’ny Filoham-pirenena tamin’ireo lehiben’ny fokontany miisa 188 amin’ireo 192 avy amin’ ireo fokontany avy eto Antananarivo Renivohitra. Nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’izany fa fihaonana mivantana, na ihany koa fihaonana amin’ny mpiara- miasa akaiky, izay manana andraikitra iraisana.Teo ihany koa ny filazan’ny Filoha ny mahakasika ny andininy faha-152 anatin’ny lalàm-panorenana izay misy fifangaroana ihany mikasika ny andraikitra sy ny asan’ny filohan’ny fokontany. « Tsy ekeko io toerana izay misy ny fokontany io, ilaina fanitsiana hifotony izany, mba ahafahana tena manome ny toerany ny anjara toeran’ny fokontany izany” hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’ ny Filoha.
Na izany aza anefa hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ny andraikitry ny vondrom-bahoakam-paritra hitsinjaram-pahefana dia mazava ny fandrafetan’ny lalàm-panorenana azy, izany hoe mirona kokoa amin’ny fitazonana ny filaminam-bahoaka, fiarovana ny mpiara-monina, mitarika ny fitantanana eny ifotony, miandraikitra ny fanajariana ny tany eny ifotony, ary koa manatsara ny fiainan’ny vahoaka. Mbola nampian’ny filoha hoe « ny fanabeazana olom-pirenena dia andraikitra goavana, izay ny fahadiovan’ny manodidina no laharam-pahamehana, satria dia misy fiantraikany amin’ ny fiainam-bahoaka izany, ny aretina rahateo izao misoko mangina. Asio lalàna ny fanariam-pako » hoy hatrany ny Filoha nanipika. Anisan’ny nivoitra nandritra ny fihaonan’ny roa tonta ihany koa ny lafin’ny fandriam-pahalemana izay niresahin’ izy ireo ny mikasika ny andrimasom-pokonolona. Nangatahin’ny filoham-pirenena ihany koa ny tokony hanarahan’ ny olona ny lalàna velona, tany tan-dalàna, ary ny fametrahana ny fahefam-panjakana eny amin’ ny fokontany. Nataony ohatra tamin’ izany ny fangalarana ireny takelaka famatsiana herinaratra ireny, izay samy milaza fa tsy nisy nahita ny nangalatra ny manodidina, nefa dia fananam-bahoaka tsotr’izao izy ireny “apetrao ny fandraisana andraikitry ny mpiara-monina, izany dia hanovana ny fokontany ho amin’ ny tsara” hoy hatrany ny fanazavana izay nomeny, izay niresahany ihany koa ny mikasika ny zaridainam-bahoaka sy ny kianja filalaovana ihany koa. Naverin’ny Filoha tamin’ izany moa renivohitr’i Madagasikara Antananarivo, ka noho izany dia fitaratr’izy eo amin’ ny fahadiovana, fanatsarana ny lalana, fanomezana jiro, fantsarana ny lalan-kely, ary teo ihany koa ireo fanatsarana maro izay tonga hatramin’ ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato vokatry ny fiaraha-miasa 3P.
Ankoatra izay, dia nisy ihany koa ny fitondran’ny Filoham-pirenena fanazavana mikasika ny fisandratana 2030, tanjona amin’ ny fitomboana sy ny fiovana. Noho izany, dia nomarihan’ny Filoha fa ny planina nasionaly ny fampandrosoana dia teboka iray niaingana, ary ny lalana hahatongavana amin’izany dia izay vita rehetra nandritra izay efa-taona izay. Ny fisandratana dia mipetraka amin’ny fiaraha- mientan’ny rehetra, ny fahaterahana indray dia ny fiovan’ ny foto-pisainana ihany koa, izay hanome hery ny kolontsain’ ny fisandratana. Nampahafatarin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa ny PIB ny Malagasy dia 716 Dolara, ny taona 1960, izay amin’ izao fotoana dia 415 Dolara, “ tsy ekeko intsony izao fidinana izao vokatry ny krizy politika nifanesy teto amin’ny firenena” hoy ny Filoha. Noho izany dia tapitra voazavan’ny Filoha avokoa ny antanan-tohatra izay lalovana toa ny efa fahavitan’ireo fotodrafitrasa maharitra maro, izay hanome hery ny fisandratana, izay anisan’ny zava-dehibe dia ny fambolena, ny fanjonoana, harena an-kibon’ ny tany, na ihany koa ny fizahan-tany. Ho taratry ny 2030, dia tondro miisa efatra no apetraka eto amin’ny firenena, dia ny fiaraha- mientanan’ny rehetra , izay hipetraka isam-paritra. “ Ilaina ny fiaraha-mientan’ ny rehetra, ny fametrahana ny fitoniana sy filaminana eto amin’ ny firenena, ary indrindra ny fitiavan-tanindrazana ahafahana tonga any amin’ny fisandratana. Hoy hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Nandritra ny fihaonana kosa moa no nitondran’ireo lehiben’ ny fokontany eto amin’ ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny fitarainana sy ny fangatahan’izy ireo manoloana ny Filoham-pirenena. Izany dia ny mahakasika ny CLD, ny fampianarana ny tanora, ny fijerena ny fandinihana ny tambin-karaman’ireo lehiben’ ny fokontany, ady amin’ ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiangonan’ny rano eny amin’ ny faritra iva, tsy fahampian’ny tetibola, ary indrindra ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa amin’ ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.